Agaasime ku xigeenka FBI-da oo shaqada isaga tagay - BBC News Somali
Agaasime ku xigeenka FBI-da oo shaqada isaga tagay
30 Jannaayo 2018
Image caption Andrew McCabe ayay xaaskiisa Dr Jill McCabe ka tirsantahay xisbiga dimoqoraadiga
Agaasime ku xigeenkii hay'ada sirdoonka Maraykanka ee FBI Andrew McCabe ayaa shaqadii isaga tagay, iyada oo ay horey u jirtay in madaxweyne Trump uu ugu eedeeyay in uu yahay nin aanan caddaalad ahayn.
Waxaa la sheegay in agaasimaha FBI-da Christopher Wray uu McCabe ku cadaadiyay in uu is casilo wax yar ka hor inta aanan qiimeyn guud lagu samaynin FBI-da.
Trump ayaa todobaad ka hor sheegay in uu doonayo in McCabe uu shaqada ka tago.
Afhayeenka Aqalka Cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in go'aanka is casilaadda agaasime xigeenka uusan ahayn mid ka yimid Aqalka Cad.
FBI-da Mareykanka oo yeelatay hoggaan cusub
McCabe ayaa muddo yar noqday agaasimaha FBI bishii May ee sanadkii hore kadib markii Trump uu shaqada ka eryay agaasimihii hore James Comey kaas oo hormuud ka ah baaritaanka farogalinta Ruushka ee doorashooyinkii Maraykanka.
Trump ayaa markii dambe magacaabay Christopher Wray, waxaana soo baxay warar sheegayay in Mr Wray uu ku hanjabay in uu iscasili doono haddii aanan laga dhaafin cadaadis la sheegay in uu ku hayay Xeer Illaaliyaha Guud Jeff Sessions oo ahaa in uu xilka ka qaado ku xigeenkiisa McCabe.
McCabe ayaa markii horeba la filayay in uu xilka ka dego horaanta sanadkan 2018-ka, sababtuna ahayd in uu gaaray da'dii gunada gaboowga.
Mid ka mid ah waxyaabaha uu Trump ku eedeeyay McCabe waxaa ka mid ah in xaaskiisa Dr Jill McCabe ay ka tirsantahay xisbiga dimoqoraadiga, islamarkaasna mar ay lacag dhan $500,000 ka heshay koox taageerta Hillary Clinton xili haweenaydan ay isu sharaxday kursiga Aqalka Senate-ka Virginia.
Mar ay labada nin ku kulmeen Aqalka Cad, Trump ayaa McCabe weeydiiyay musharaxa uu u codeeyay doorashadii 2016-kii, taas oo uu uga jawaabay in uusanba codeynin. Waxa kale oo uu weeydiiyay in xaaskiisa uu su'aalo dhadhanka ay leedahay guuldarada, isaga oo ula jeeday tartankii lagaga guuleystay Dr Jill McCabe.
Xil ka tagista ninkan ayaa waxa la sheegay in ay salka ku heysto qorshe balaaran oo uu Trump doonayo in uu ku eryo dad badan oo uusan jecleyn oo ka tirsan laamaha amniga sida ay ku doodayaan xildhibaanada dimoqoraadiga.
Waxaa kale oo la sheegay in xil ka tagista agaasime ku xigeenka in ay saamayn toos ah ku yeelan doonto baaritaanka dacwad oogaha gaarka ah ee baaraya fadeexadda Ruushka Robert Mueller.